३०० घरहरु पुरिए, नौ जनाको श-व भेटियो, ५५ भन्दा बढि अझै बेपत्ता ! बिन्ती छ सेयर गर्नुहोला। - खबरदार न्युज
३०० घरहरु पुरिए, नौ जनाको श-व भेटियो, ५५ भन्दा बढि अझै बेपत्ता ! बिन्ती छ सेयर गर्नुहोला।
असार २, २०७८ बुधबार 12
हिजो अपरान्हदेखि परेको अविरल वर्षासँगै भिषण बाढीको चपेटामा परेको सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती नदिको तटीय क्षेत्रमा ठूलो धनजनको क्षति भएको विवरण प्राप्त भएको छ । घटनास्थलको हवाई अवलोकन गरेर फर्केका स्थानीय पत्रकार रामचन्द्र दुलालका अनुसार हालसम्म नौ जनाको श’व भेटिएको छ भने हेलम्बुदेखि दोलालघाटसम्मका ३०० भन्दा बढि घरहरु डुबानमा परेका छन् ।
सबैभन्दा बढि क्षति मेलम्ची बजारमा भएपनि हेलम्बु, चनौटे, तिउल, ग्याल्थुङ, तारामाराङ, मेलम्ची, बाहुनेपाटी, सिपाघाट, दोलालघाट सम्मका नदि किनारामा क्षेत्रका घर, खेत, बारीहरु नष्ट गरेको जनाएको छ ।
आजै विहान घ’ट’नास्थलको अवलोकन गर्न पुगेको सो क्षेत्रका निवर्तमान सांसद मोहन बस्नेतलाई स्थानीयबासीले ५५ जना अझै बेपत्ता भएको जानकारी गराएका हुन् । सो क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा ९ जनाको शव भेटिएको जानकारी स्थलगत अवलोकन गरेर फर्केर आएको टोलीले बीमा पोष्टलाई जानकारी गराएको छ ।
‘घ’ट्’नास्थल निकै भ’यावह र ड’रलाग्दो छ, अवस्था निरिक्षण गरेर फर्केको छु, अब सहयोग जुटाएर आजैसाँझसम्म जनताको सेवामा फर्कने तयारी गर्दैछु ।’ निवर्तमान सांसद बस्नेतले भने । मेलम्चीभन्दा माथिको क्षेत्रहरु हेलम्बु, चनौटे, तिउल लगायतका क्षेत्रमा पनि बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएको छ । बाढीले हेलम्बुदेखि सिन्धुपाल्चोकको सिपाघाट हुँदै काभ्रेको दोलालघाटसम्म क्षति पुर्याएको पाइएको छ ।
नदिको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बढि र तल्लो तटीय क्षेत्रमा कम भएपनि दोलालघाटका सयौं विघा धान खेत बगरमा परिणत भएको स्थलगत अवलोकनको क्रममा फेला परेको छ ।
इन्द्रावती नदिमा आएको बाढीका कारण सो नदिको तटीय क्षेत्रमा आएको बाढीका कारण अर्बौ रुपैयाँको भौतिक क्षति पुगेको छ । यद्यपि ग्रामिण भेगमा बीमाबारे पर्याप्त जनचेतना नहुँदा धेरैले बीमा नै नगरेकोले ठूलो मात्रामा बीमा दावी पर्ने सम्भावना छैन । यद्यपि कैयौं पक्कीघरहरु समेत कामै नलाग्ने गरी पुरिएकोले बीमा दावी पर्ने सम्भावना भने रहेको बीमा कम्पनीहरुल जनाएका छन् । सञ्चार सम्पर्क बिच्छेद भएकोले बीमा दावी परि नसकेको सगरमाथा इन्स्योरेन्सका सिईओ चंकी क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
स्थानीयबासीले बैंकबाट ऋण लिएर घर बनाएको हुँदा बैंकबाट ऋण लिँदा कतिपय बैंकले बीमा अनिवार्य गरेका कारण बीमा दावी पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
कृपया समाचार पढिसकेपछी सक्दो सेयर गर्नुहोला।
Posted in Breaking News, राष्ट्र, समाचार, समाज
Prevलगातार ३ पटक ज्या’नै मा’र्नेगरी भएको ह’मला पछि ज्ञानेन्द्र शाहिको नेपालमै नबस्ने घोषणा ! पूरा पढ्नुस!
Nextहे भगवान ! मेलम्ची बजार बन्यो छिनभरमै पानीको ताल । हेर्नुस अहिलेको अवस्था… Share गर्नुहोला।
एकपछि अर्को आपत: कमेडियन आदर्श मिश्रालाइ कारबाहीको माग! पूरा पढ्नुस…
आछामका १० स्थानीय तहको बेरुजु ४३ करोड ७१ लाख – सबैभन्दा बढी पंचदेवल बिनायक नगरपालिका ।
पाँडे सक्किगोनीमा नआउनुको कारण यस्तो : सक्किगोनी छोडेकै हुन त? पूरा पढ्नुस…
एक्कासी प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदै।
भारतिय सेनाको दादागिरी : बिच नदिमा पुगेको तुइन का’टेर नेपालीको ह’त्या तर सरकार मौन ! सेयर गर्नुहोला… (39)
टिकटक बाटै महिनाको लाखौँ कमाउने अन्शबर्मा काठमाडौमा घर किन्दै – गाली गर्नेहरुलाइ यसो भन्छन मनकारी अन्श । (27)
विपक्षी दल एमालेको विरोधका बीच प्रतिनिधिसभाबाट बजेट पारित (22)
एका बिहानै आयो दु:खद खबर ! रहेनन हास्य कलाकार सम्भु थापा”बखते” (20)
यस्तो छ एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालय, मासिक भाडा ३ लाख २५ हजार (20)
नेपाली बजारमा रियलमीका चार वटा मोवाइल सार्वजनिक, मूल्य र विशेषता के छन् ? (18)
के बिजय शाहीले आ’त्मह’त्या गरेकै हुन त? (17)
टुँडिखेलमा यसरी मनाइयो संविधान दिवस (फोटो फिचर) (17)
तुर्माखाँद गाउँपालिकामा कबिराम बयकको टिम अत्याधिक बहुमतले बिजय !
कक्षा १२ को नतिजा तिहारपछि प्रकाशित हुने
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले आयोजना गरेको सम्मेलनलाई प्रधानमन्त्री देउवाको सम्बोधन (भिडियो)
वामदेव गौतमले पार्टीको उपाध्यक्षसहित सवै जिम्मेवारीबाट दिएको राजीनामा अस्वीकृत
सुर्खेतको सिम्तामा बस दुर्घटना, १२ जना घाइते
घर बनाउदा लागेको ऋण तिर्न बिदेश हिडेका धामिलाइ भारतिय सेनाले तुइनको डोरि का’टेर नदिमा झार्यो : घरपरिवारको बिच’ल्ली !
नयाँ नियम सहित देशैभर फेरि लक डाउन । यस्तो छ नयाँ मापदण्ड – स्कुल, पसल बन्द?
आर्थिक आव्हान खोल्ने सम्बन्धि तुर्माखाँद गाउँपालिका अछामको सुचना ।
टिकटक बाटै महिनाको लाखौँ कमाउने अन्शबर्मा काठमाडौमा घर किन्दै – गाली गर्नेहरुलाइ यसो भन्छन मनकारी अन्श ।
भारतिय सेनाको दादागिरी : बिच नदिमा पुगेको तुइन का’टेर नेपालीको ह’त्या तर सरकार मौन ! सेयर गर्नुहोला…
© 2021 खबरदार न्युज